Isikhundla Sabafazi Esikweni lamaVenda
Ukubaluleka Kwabesifazane besiVenda
Ngokujwayelekile abesifazane baseVenda babengenalo isikhundla esifanayo esingaphansi kwabesifazane emaqenjini amaningi aseNingizimu Afrika. Ngaphakathi egcekeni lakhe, owesifazane wayenamandla okulawula, futhi abesifazane asebekhulile basebenze indima ebalulekile emfundweni, bexoxa izindaba zabo emlilweni.
Abesifazane bangaba nempahla yabo, ngokuvamile abayinikezwa okhokho babo, kodwa ingaba nefa lapho kungekho ndlalifa yindoda. Kukhona amacala abesifazane abenza njengombuso wengane encane, kanti ikhosi ingamisa udadewabo njengenduna noma umama. Okungenani ukubusa okulodwa (eMizwi) kuye kwadluliselwa emgqeni wesifazane ngezizukulwane.
I-makhadzi, udade osekhulile wekhanda lomndeni, wayazi izimfihlo eziseduze zomndeni futhi waba namalungelo amaningi phezu kwezingane zomfowenu kunomama wakhe. Imikhosi eminingi ayengenakwenziwa ngaphandle kwakhe, futhi uma kwenzeka amakhosi adlala indima enkulu ekunqumeni ukulandelana.